क्याट्रिनाका फ्यानका लागि आयो अत्यन्तै दुखद खबर ! - समृद्ध नेपाल
क्याट्रिनाका फ्यानका लागि आयो अत्यन्तै दुखद खबर !
क्याट्रिनाका फ्यानका लागि आयो अत्यन्तै दुखद खबर, आखिर के भयो क्याट्रिनालाई ? क्याट्रिनाका फ्यानका लागि आयो अत्यन्तै दुखद खबर, आखिर के भयो क्याट्रिनालाई ?काठमाडौं- कोरोना कहर बलिउड स्टारमा लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । एक के बाद गरी कोरोना बलिउड स्टारहरुमा देखा परिरहेको छ । यहि बिच बलिउड नायिका कट्रिना कैफलाई पनि कोरोना पोजेटिभ भएको छ । कोरोना देखिएपछि उनी होम क्वारेन्टाइनमा बसेकी छन् ।
कोरोना देखिएपछि उनले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिँदै लेखेकी छन् मलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ म आइसुलेसनमा बसेको छु मेरो सम्पर्कमा रहेका सबै सुरक्षित रहनु होला । यस अघि उनका प्रेमी विक्की कौशललाई पनि कोरोना देखिएको छ । कोरोना देखिएपछि उनी पनि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यस अघि कार्तिक आर्यन आमिर खान आलिया भट्ट लगायतका स्टारमा कोरोना देखिइसकेको छ ।
यो पनि ,अभिनेत्री भुमि कोरोना संक्रमितमुम्बई । बलिउड अभिनेत्री भुमि पेडनेकर कोरोना संक्रमित भएकी छन् । भुमिले आफु कोरोना संक्रमित भएको जानकारी इस्टामार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । म आराम महसुस गरिरहेकी छु । हल्कालक्षण देखिएको छ । डाक्टरको टचमा रहँदै सावधानी अपनाइरहेकी छु’ उनले लेखेकी छन् यदि तपाई मेरो सम्पर्कमा आउनुभएको भए तुरुन्त टेष्ट गर्नुस् भिटामिन सी र खाना राम्रोसँग खाएर आफुलाई खुसी समेत राखेको बताएकी भुमिले अहिलेको परिस्थितिलाई हल्का रुपमा नलिन सबैमा अनुरोध समेत गरेकी छन् ।
७२ घण्टामा आफ्नो फोक्सो आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं !
एसपी दानबहादुर मल्लले टेरेनन् डीआईजीको निर्देशन !
समुन्द्रको परिकल्पनासहित बनाइएको लुम्बिनी प्यालेस एक चोटी पुग्नै पर्ने !
७ दिनमै शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय !
जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने !
राष्ट्रपति आज स्वदेश फर्कदैँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिए !
आज उदयपुर नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाबमा राई र खड्का भिडन्त !